အမုန်းမပွားရေး ပန်းစကားလှုပ်ရှားမှု သြင်္ကန်မှာ ဆင်နွှဲ
"လူသားအချင်းချင်း အမုန်းမပွားဖို့ ငါတို့နှုတ်ကို စောင့်စည်းစို့" ပန်းစကားလှုပ်ရှားမှုကို ဧပြီလ ၁၅ ရက် သြင်္ကန်အကြတ်နေ့ က ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ပြုလုပ်နေစဉ်
“ပန်းစကား” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ လူငယ်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ဟာ “လူသားအချင်းချင်း အမုန်းမပွားဖို့ ငါတို့နှုတ်ကို စောင့်စည်းစို့” ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ဒီနေ့ သြင်္ကန်အကြတ်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်းက သြင်္ကန်ရေကစားမဏ္ဍပ်တွေကို လှည့်လည်ပြီး အမုန်းတရား မပြန့်ပွားရေးအတွက် နှိုးဆော်နေ ကြပါတယ်။
ဘာသာမတူ လူမျိုးမတူသူတွေအကြား တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ချစ်ခင်စွာဆက်ဆံပြောဆိုကြဖို့ကို တိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ ပန်းစကားလှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ဖြစ်တာလို့ ပန်းစကား အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ကိုနေဘုန်းလတ်က ပြော ပါတယ်။
"အင်တာနက်ပေါ်မှာရော အပြင်မှာရောပေ့ါနော်၊ Hate Speech လို့ခေါ်တဲ့ အမုန်းပွားစေတဲ့ စကားတွေရယ် Dangerous Speech လို့ခေါ်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့ စကားတွေရယ်၊ အဲဒါတွေဟာ တော်တော်လေးကို များလာတယ်ပေါ့နော်၊ အဲဒီအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းက ပြဿနာဖြစ်တာတွေများလာတော့ အဲဒါကိုစိုးရိမ်လို့ ကျနော်တို့က ပန်းစကာာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးယူပြီးတော့ လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်၊ ဒီလိုလှုံ့ဆော်မှုတွေကို လူငယ်တွေက အရမ်းကိုစိတ်ညစ်ပြီးတော့ စိတ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကို ဒီပန်းစကားလှုပ်ရှားမှုက ပြလိုက်တာပဲ"
သြင်္ကန်ကား ၅ စီးလောက်နဲ့ လူငယ် ၅၀ လောက်ဟာ အင်္ကျီအနီရောင်ဆင်တူတွေ ဝတ်ဆင်ပြီး လှည့်လည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းစကားအဖွဲ့ဟာ မန္တလေး၊ ပဲခူး၊ ဒလ၊ သန်လျင်၊ ပခုက္ကူ စတဲ့နယ်တွေမှာလည်း ဧပြီလ ၄ရက်နေ့ကစပြီး အလားတူ လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
လာမယ့် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာလည်း ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုဒ်မှာ အမုန်းတရားတွေ မပြန့်ပွားစေဖို့ ဆောင်ပုဒ်နဲ့ ဆုတောင်းပွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
‘ပန်းစကား’ အဖွဲ့လိုပဲ ‘ပုံပြင်ပြောသူများ’ လို့အမည်ပေးထားပြီး ကလေးငယ်တွေကို ပုံပြင်တွေ လိုက်ပြောပြတဲ့ Myanmar Story Tellers အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရပ်တည်လာတာ ၄နှစ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့ ဘယ်လို ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ၊ ဘယ်လိုပုံပြင်တွေကို ပြောပြသလဲဆိုတာ RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်း တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့မှ လူမှုရေးအဖွဲ့များ အမုန်းမပွားရေး နှိုးဆော်
အမုန်းမဲ့လွင်ပြင်မှာ သြင်္ကန်“ပန်း” သာမက “၁၂ရာသီ မညှိုးပန်း”များလည်း အစဉ်ပွင့်လန်းနိုင်ကြပါစေ။
Apr 17, 2014 03:36 PM
Hate speech based on religious beliefs, Conspiracy, plot, divide & rule basic AND shameless & dirty policies of destruction still in USE as political trap. Be careful.
Apr 16, 2014 07:14 PM
များများလုပ်ကြပါ။ မြန်မာတွေ အတော်များများက စစ်အစိုး၇ လက်အောက်မှာ မကျေနပ်ချက်တွေ ရင်ထဲ သိုထားပြီး အခုမှ ဟိုရမ်း ဒီရမ်း အမုန်းစကားတွေ ပြောနေကြတာပါ။ ဘာလေးဖြစ်ဖြစ် သတ်ချင် ဖြတ်ချင်နေကြတာ သူများတွေ နှာခေါင်း ရှုတ်စရာ ဖြစ်နေပြီ
Apr 16, 2014 09:45 AM